Xabsiga qasriga ah ee Amiirrada Sucuudiga - BBC News Somali
Xabsiga qasriga ah ee Amiirrada Sucuudiga
Image caption Hoteelka Ritz Carlton ee xabsiga loo rogay
Illaa 200 boqol oo amiiro iyo ganacsato ah ayaa goobtan lagu hayaa, kadib go'aan uu gaaray dhaxalsugaha boqortooyada Sucuudiga Maxamed Binu Salmaan, kaas oo sheegay in uu la dagaalamayo musuqmaasuqa.
Sidaasi oo ay tahay wax badan lagama oga waxa meeshan ka jira, waxyaabaha soo baxayna waa kuwa aad u yar, balse wararka la'isla dhexmarayo ayaa ah kuwa aad u badan.
Amiir ka tirsan boqortooyada Sucuudiga oo ku dhintay shil diyaaradeed
Dhaxalsugayaasha Sucuudiga ee la dayriyey
Image caption Qaar ka mid ah dadka lagu hayo meesha
Waxaa meesha ku sugan mas'uul ka suga xafiiska dacwad oogaha guud iyo wax lagu sheegay ururka xuquuqul insaanka madaxa banaan, waxa ay xog naga siinayaan waxa meesha ka jira, balse shuruudda waxa ay tahay in aanan qofna magaciisa xiganin.
Waxaan weeydiinay sababta halkan loogu soo xiray dadka, jawaabtuna waxa ay ahayd "Waxaan ka cabsanay in qaarkood ay baxsadaan, sidaas darteed ayaan gudaha usoo galinay" ayaa nalagu yiri.
Image caption Koobkii qaxwaha waa $100 balse qiimihiisa rasmiga ah waa $10 doolar
Su'aalaha ku saabsan sharciyadda loo maray talaabada dadka lagu soo xirxiray ayaa waxaa jawaab lagaaga dhigayaa in xafiiska dacwad oogaha uu yahay mid madax banaan.
"Waa nidaam sahlan, qofka waxaan tusaynaa cadaymaha aan ka heyno, waxaanan weeydiinaynaa in uu soo celiyo lacagtii uu dhacay" ayuu yiri sargaalka ka socda xafiiska dacwad oogaha guud.
Image caption Lyse Doucet iyo Philip Goodwin oo BBC-da ka tirsan ayaa ahaa wariyeyaashii ugu horeeyay ee loo ogolaado gudaho hoteelka
Waxaa jira warar ka hadlaya in lacagaha la xaday ay gaarayaan 800 bilyan oo doolar, balse markii aan arrintaas wax ka weeydiinay saraakiishii aan kula keenay Hotel Ritza Carlton ayaa waxa ay ku jawaabeen "xitaa haddii aan ka helo $200 bilyan, waa wax fiican".
Sargaalkan oo ka tirsan guddiga baaritaanka ee gaarka ah ayaa waxa uu tusaale usoo qaatay koob qaxwe ah oo uu cabayay "hadda koobkan qiimihiisa dhabta ah waa $10 doolar, balse waxaa laga dhigay $100 doolar", wuxuu sidoo kale tusaale usoo qaatay dhismooyin qabyo ah oo iskuulaad iyo isbitaalo ah kuwaas oo qarashka ku kacaya laga dhigay boqol milyan oo doolar, balse qarashka rasmiga ah uu kaas aad uga yaryahay.